This entry was posted in ကဗျာ by မိုးဇက်. Bookmark the permalink.
Candy on 13 June 2012 at 08:43 said:
တိုတယ် ထိတယ် အရမ်းကြိုက်တယ် တယ်ရင်း
စံပယ်ချို on 13 June 2012 at 22:06 said:
မူရင်းဆရာ မောင်စိန်ဝင်း (ပုတီးကုန်း)
Anonymous on 13 June 2012 at 23:18 said:
မောင်စိန်ဝင်(ပုတီးကုန်း)ရဲ့ သောကခြေရာလေးများ ကဗျာစာအုပ်ပျောက်သွားတယ် ပြန်ရှာတယ်မရသေးဖူး ဝယ်ကြည့် တယ်မရသေးဖူးးးးး
မောင်သာပြည့် စတဲ့ ဆရာတွေကိုသဘောကျလို့
Cameron on 14 June 2012 at 03:26 said:
မိုးဇက် on 14 June 2012 at 07:10 said:
မိုးဇက် on 14 June 2012 at 07:11 said:
အကိုရဲ့ နာမည်ယူပုံလေးသိခွင့်ရလို့ ကျေးဇူးပါ ၊ ကျွန်တော်လဲ အဲဒီစာရေးဆရာတွေကို ကြိုက်တယ်ဗျ .........
မိုးဇက် on 14 June 2012 at 07:12 said:
တိန် ........ ၊ အမ အလည်ပြန်လာလို့ကျေးဇူးပါ
Angelhlaing(May everybody be happy and healthy! on 15 June 2012 at 10:44 said:
အိမ်မက်စေရာ on 17 June 2012 at 09:23 said:
တိုတိုလေးနဲ့ ထိမိတဲ့ ကဗျာလေးကြိုက်တယ်...ညလေးရေ..
အိမ်မက်တို့တော့ ညလေး တစ်ယောက်ကောက်ရထားတယ် ဟိဟိ.. သမီးစံ ကျေးဇူးနဲ့လေ..
အစ်ကို အိမ်မက်း)
yewinpaing on 26 August 2014 at 18:26 said: